Thailand ilaa UK: Oh sidee COVID-19 u bedeshay muuqaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Thailand ilaa UK: Oh sidee COVID-19 u bedeshay muuqaalka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Thailand ilaa UK - Hoyga cusub ee David Barrett ee ku yaal Cornwall
David Barrett, ka dib 32 sano oo uu ku noolaa Thailand, masuulkan sare ee safarka hore wuxuu dhawaan ku soo laabtay dalkiisa UK si uu u dhiso gurigiisa. Waa kan sheekadiisa…
Ka degitaanka Boqortooyada Midowday horaantii aafada ka timaadda Thailand waxay ahayd habeen iyo maalin.
Dadku way neef baxeen markii aan galay bangiga anigoo xiran maaskaro, ma ahan inay u maleeyeen inaan doonayo inaan dhaco, laakiin waxay u maleynayeen inaan la xanuunsanahay "viruska Shiinaha".
Miyaan joogayaa mise waa inaan halkan ku soo bandhigaa?
Hal sano kadib iyo dib udhac nasiib. Sannad ka hor, si aad u dhow, Maarso 18, 2020, waxaan u duulay Boqortooyada Midowday iyada oo ujeedkeedu yahay inaan arko maal-gashiga hantida mustaqbalka ee Cornwall. Waxaan joogay Koonfur Bari England seddex maalmood ka hor safarka tareenka ee la qorsheeyey iyo socod aan ku aaday Cornwall.
Maalinta Labaad UK, iyadoo Brits ay ladaalaa dhaceyso maalmihii ugu horeeyey ee masiibada, waxaanan aaday booqasho aan ku imaado bangigeyga si aan balan ula yeesho. Markii aan galay bangiga anigoo xiran maaskaro, waxaan maqlayay macaamiisha iyo shaqaalaha oo ciil qaba markay gadaal u laabanayeen oo ay i fiirinayeen cabsi aniga oo wajiga xiran. Xoog-haye dhalinyaro ah ayaa igu soo degdegay oo wuxuu i geeyay qol yar oo lagu shiro. Maamulaha bangiga ayaa markaa soo galay wuuna ka argagaxay markuu arkay aniga oo wajiga maaskaro xidhan. “Ma xanuunsan tahay?” Ayay waydiisay. Ma haysaa fayraska Shiinaha? Waxaan si adag ugu jawaabey inaan xirto maaskaro amaankeyga, maadaama ay si fiican u qaadi karto oo ay u sido virus-ka. Waqtigaas ayuu karraanigii yaraa ku soo yaacay qolka, isagoo dul wareegaya maareeyaha bangiga oo fadhiya wuxuuna bilaabay inuu hawada ku buufiyo ceeryaamo wanaagsan oo sunta disha. Dhibcaha ma aysan soo gaarin laakiin waxay ku soo degeen laptop-ka iyo timaha maareeyaha. Maamulaha oo xanaaqsan ayaa canaantey karraanigii isagoo ku leh, “Waxaad qoysay keybkeyga!” Kahor intaanu karraanigu fursad u helin inuu cadeeyo ficilkiisa biosecurity, maareeyaha ayaa farta ku fiiqay albaabka kana masaxay kombuyuutarkeeda.